China OEM Supply China Banana Silverware Drawer Organizer lakozia, mpitazona fitaovana tsy azo ovaina sy fantsom-bokatra miaraka amina orinasa mpamokatra sy mpamaky | Bridge Style
OEM Supply China Bamboo Silverware Drawer Organizer lakozia, mpitazona fitaovana tsy azo ovaina sy fantsom-bokotra miaraka amina mpizara sy antsy sakana
Refy: 16.93 x 12.99 x 1.97 santimetatra 43Lx33 / 50.5Wx5H (cm)
Teny nalaina haingana sy tena tsara, mpanolo-tsaina nampahafantatra anao hanampy anao hisafidy ireo varotra marina mifanaraka amin'ny safidinao rehetra, fotoana famoronana fohy, baiko mahay sy tompon'andraikitra isan-karazany amin'ny fandoavana sy fandefasana entana ho an'ny OEM Supply China Bambu Silverware Drawer Organizer Kitchen, Expensable Utensil Holder ary Cutlery Tray miaraka amin'ny Divider and Knife Block, efa nihaza mialoha izahay hiara-hiasa amin'ny fiaraha-miasa tsara lavitra miaraka amin'ireo fanantenana any ivelany mifototra amin'ny tombotsoan'ny tsirairay. Hamarino tsara fa tena afaka mahazo miresaka aminay ianao amin'ny halalin'ny fanampiny!
Teny nalaina haingana sy tena tsara, mpanolotsaina manam-pahalalana hanampy anao hisafidy ireo varotra marina mifanaraka amin'ny safidinao rehetra, fotoana famoronana fohy, baiko tsara tompon'andraikitra ary orinasa samihafa amin'ny fandoavana ny raharaha fandefasana sy fandefasana. China Banks Drawers Organizers sy Banana Drawer Organizer Trays vidiny, Ny haben'ny tsenanay momba ny vokatra sy ny vahaolana dia nitombo isan-taona. Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao na te hiresaka momba ny filaharana, dia alao antoka fa afaka mifandray aminay ianao. Izahay dia niandry ny fananganana fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ireo mpanjifa vaovao manerantany ato ho ato. Izahay dia niandry ny fanontanianao sy ny baikonao.
Tombontsoa ho an'ny rafitra: hatsarain'ny tetezana ny fifangaroana eo anelanelan'ny takelaka roa.
Asa tonga lafatra: 13 "hatrany ambony ka hatrany ambany, ny sakany dia mivelatra hatramin'ny 13 ″ (efamira 7) ka hatramin'ny 20" santimetatra). Mifanaraka amin'ny haben'ny drawer mahazatra rehetra.
Hoso-doko tsara tarehy: Style Bridge dia mety ho loko mainty / volondavenona / fotsy / ary izay loko tadiavinao, ity takelaka vita amin'ny volotsangana ity dia toa lafo vidy sy kanto, tsy ny magazay ihany, fa ny safidin'ny fanomezana an-trano ihany koa.
Mora ny manadio: mahazaka rano, vita amin'ny akora volotsara 100% mahamety ny tontolo iainana mba hamafana mora amin'ny lamba mando.
Multifunctional: mety ho mpikarakara drawer an-dakozia, mpikarakara fandroana ho an'ny lehilahy, mpikarakara vatasarika fikolokoloana, mpikarakara sary hoso-doko, fitoeram-bokatra, vatasarihana birao ary mpikarakara kabinetran'ny rakitra ary maro hafa.
Tongasoa ireo mpamorona atitany, varotra, mpanao mari-trano ary mpifanaraka!
Izahay eto dia hanampy amin'ny fangatahanao manokana ary manantena ny hiara-miasa aminao. Teny nalaina haingana sy tena tsara, mpanolotsaina manam-pahalalana hanampy anao hisafidy ireo varotra marina mifanaraka amin'ny safidinao rehetra, fotoana famoronana fohy, baiko mahay sy tompon'andraikitra isan-karazany amin'ny fandoavana sy ny fandefasana entana ho an'ny OEM Supply China Stackable Bambu Drawer Organizers, Izahay efa fihazana mialoha ny fiaraha-miasa tsara kokoa miaraka amin'ireo vinavina any ivelany miorina amin'ny tombotsoan'ny tsirairay. Hamarino tsara fa tena afaka mahazo miresaka aminay ianao amin'ny halalin'ny fanampiny!
OEM Supply China Stackable Bamboo Drawer Organizers and Bamboo Drawer Organizer Trays vidin'ny, Ny tsenanay ny vokatra sy ny vahaolana dia nitombo isan-taona. Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao na te hiresaka momba ny filaharana, dia alao antoka fa afaka mifandray aminay ianao. Izahay dia niandry ny fananganana fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ireo mpanjifa vaovao manerantany ato ho ato. Izahay dia niandry ny fanontanianao sy ny baikonao.
Teo aloha: Sina Vidiny mora vidy China Kitchen Bambu Drawer Organizer ho an'ny fitehirizana lakozia Drawer mpizara fitaovana amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny latabatra
Manaraka: 100% Original China Wholesale Cheap Vidiny Vary Spice tavoahangy tavoahangy fitoeram-bozaka lakozia Spice Rack Organizer
Fonosana refy 16.93 x 12.99 x 1.97 santimetatra 43Lx33 / 50.5Wx5H (cm)
Lanja 1.9kg / 4.22pounds
Fampahalalana CTN 6 pcs / ctn
Lanja afa-karatsaka 11.4kg / ctn
Lanja tsy afa-karatsaka 12kg / ctn
Fandefasana santionany maimaimpoana amin'ny kaonty DHL / Fedex
Karatra fisaorana maimaim-poana
Sary mitifitra maimaimpoana
Fisondrotana fialantsasatra CNY
China Banks Drawers Organizers sy Banana Drawer Organizer Trays vidiny
mpikarakara tabilao kosmetika
Mpikarakara sary fanaovana lakozia
lozantsara mpikarakara lakozia ho an'ny cutlery
mpizara vatasarihana mpikarakara atin'akanjo
vatasarihana mpikarakara birao hazo
Fivarotana fivarotana sinoa azo volena vita amin'ny volkano any Chine ...
Mpanaparitaka ambongadiny vita amin'ny bararata (slot 7-9) B ...